Ny fahazazany sy ny fahatanorany – FJKM Ambavahadimitafo Ny fahazazany sy ny fahatanorany |
I Ndriana valo volana
Teny amin’ny hopitaly Soavinandriana izy no teraka tamin’ny 25 septambra 1963. Razafintsifa Henri Roger sy Andriamanga Oeline Rasoavelonoro no ray aman-dreniny ary izy no zanak’izy ireo lahimatoa.
Samy mpiasam-panjakana izy ireo, ny rainy moa tao amin’ny Paositra, ary ny reniny tao amin’ny Fitsarana.
Teny Ankorahotra no tanana nonenan’ny fianakaviany tamin’ny fahazazany. Tao amin’ny sekoly tsy miankina iray teny Ambondrona, nantsoina hoe “Ecole Nazareth”, no nianarany voalohany. Avy eo dia nifindra tao amin’ny EPP Antsahabe.
Tia milalao toy ny ankizy rehetra izy. Ny ahatsiarovan’ny olona azy tamin’izany dia ny fitiavany mihazakazaka rehefa milalao. Teo koa ny fitiavany fianarana, ka tsy mba namerina kilasy mihitsy izy. Ankorahotra moa tsy lavitra loatra ny oniversite, ka raha nanontanian’ny olon-dehibe izy hoe “aiza no hianatra?”
dia ny hoe “eny amin’ny oniversite” no valiny nataony.